Lalan'ny Frankôfônia - Voarara tanteraka ny fandehanan' ny posiposy, sarety ary kalesa
Tsy mahazo mandeha eny amin’ny lalan’ny Frankôfônia mihitsy ny posiposy sy ny sarety ary ny kalesa, na aorian’ny fihaonana an-tampon’ny firenena mampiasa manontolo na ampahany ny teny Frantsay na Frankôfônia andiany faha-16, aza. «Mba hiarovana ny fotodrafitrasa tsy ho simba dia tsy azon’ireo fitaterana ireo mihitsy ny mifamoivoy eny amin’ireo lalam-baovao eto Antananarivo. Ny fiarabe mihoatra ny 3,5 taonina ihany koa tsy mahazo mandeha ankoatra ireo mpitatitra solika eny amin’ny tobin-tsolika sy eny amin’ny orinasa Jirama. Ankoatra izay, efa misy fanamarihana maro eny amin’ ny takelaby rehetra eny. Tsy mahazo mihoatra ny 30 km isan’ora ny hafainganam-pandehan’ny mpitatitra», hoy Razanakoto Hubert François, tale jeneralin’ny fitaterana an-tanety, omaly, tetsy Anosy.
Misy ny ora voatokana handehanan’ny fiara be, manomboka amin’ny 10 ora maraina hatramin’ny 4 ora hariva ary amin’ ny 8 sasany alina indray no mahazo mandeha ny kamiao.
«Mila fitandremana be ny fandehanana amin’ireo lalam-baovao ka mba hisorohana ny loza dia tokony hanaraka izay rehetra voalaza amin’ny takelaby ny mpitatitra
rehetra», hoy hatrany ny tompon’andraikitra.
Nilaza ny tompon’andraikitra fa efa mandeha any ny fandaminana ny lalan-jotra sy ny zotram-pitaterana vaovao mety hiasa amin’ny lalam-baovao. Etsy an-daniny, tsy voafehy fa mijanona ho fanamboarana tsy misy fampiharana ny fepetra fandrarana ny fivezivezen’ireo posy sy sarety ary kalesa amin’ny lalambe maro eto an-drenivohitra.
Mety hatolotra ny Fampanoavana ny raharaha fandratrana miaramila aorian’ny Frankôfônia